हिमाल खबरपत्रिका | ओलीको समय
‘राजनेता बन्ने अवसर’ (१६–२२, पुस) आवरण रिपोर्टले आशावादी बनायो । प्रजातन्त्रपछिको झ्ण्डै सात दशकको अवधिमा मुलुकमा जहिल्यै असल नेताको अभाव खट्किरह्यो । क्षमतावान विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला राजा महेन्द्रको चपेटामा परे । आश गरिएका नेता मनमोहन अधिकारीले नौ महीना मात्र शासन गर्न पाए । त्यसपछिका नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै हेरे ।
वाम गठबन्धनलाई जनताले दुईतिहाइ हाराहारीमा मत दिएका कारण यसपटक केपी शर्मा ओलीलाई काम देखाउने मौका छ । भारतको नाकाबन्दीका बेला ओलीले लिएको अडान र चीनसँग विस्तार गरेको सम्बन्धले पनि उनीप्रति जनअपेक्षा बढेको छ । ओलीले साँच्चै नै दुर्लभ अवसर पाएका छन् ।
सन्तोष कँडेल, अनलाइनबाट
‘भरथेग पनि धरमर’ (१६–२२, पुस) रिपोर्टले रेमिटेन्स वृद्धिदर खस्किंदै गएको र यसका असरबारे सोच्नै पर्ने बनाएको छ । देशमा रोजगारीको अवसर छैन, कृषिमा ध्यान दिइएको छैन । यस्तो बेला वैदेशिक रोजगारीले गाउँघरको दैनिकीलाई सहज बनाएकोे मात्र छैन, अर्थतन्त्रमै भरथेग गरिरहेको छ । रेमिटेन्समा आएको गिरावटले बेरोजगारी समस्या बढ्नेछ । परिणाम, अपराध र अराजकता बढ्नेछ । त्यसैले समयमै सोचौं । वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोजौं ।
तपेन्द्र भट्ट, इमेलबाट
‘हिमालः नचिनी सुखै छैन !’ (१६–२२, पुस) लेखले खुशी बनायो । हामीलाई आफ्नै सम्पत्तिको हेक्का छैन, भनौं सामान्य जानकारीसमेत छैन । यो जति सक्दो चर्चा हुनुपर्ने विषय हो । त्यसैले लेखकलाई धन्यवाद ।
कुबेर न्यौपाने, अनलाइनबाट
‘कागजी मर्मतमा करोड अनियमितता’ (१६–२२, पुस) रिपोर्टले देशको वास्तविकता झ्ल्काएको छ । नीति, नियम बनाउने कर्मचारीतन्त्रमै देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचारले देशलाई गाँजेको छ । लिलामीमा राखिएका गाडीहरूसमेत मर्मतका नाममा भ्रष्टाचार गर्नु हदैसम्मको विकृति हो । यस्ता कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
भन्ने नै हो भने नेतालाई भ्रष्ट बनाउन कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि भ्रष्टाचारमा कमी नआउनुको कारण पनि यही हो । राज्य पुनःसंरचना भइरहेको बेला निजामती तथा अन्य कर्मचारी क्षेत्रको पनि पुनःसंरचना गरिनुपर्छ ।
कृष्ण गुरागाई, इमेलबाट
तयारी खै !
‘आक्रामक ड्र्यागन’ (१६–२२, पुस) लेख दमदार छ । नेपालले पनि चीनबाट फाइदा लिनुपर्छ भन्ने विचार उचित लाग्यो । हामीले भारतसँगको जस्तो घाटाको सम्बन्ध चीनसँग राख्नुहुन्न । चीनबाट केही ल्याए उता पनि केही पठाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि तयारी थालौं ।
शर्मिला चाम्लिङ, अनलाइनबाट
जनमतमाथि धोका नहोस् ‘तुइन यात्रामा ओली–दाहाल’ (१६–२२, पुस) लेख राम्रो लाग्यो । लेखमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको वाम एकताका अवसर र चुनौती मिहिनढङ्गले केलाइएको छ । वाम गठबन्धनलाई जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउ र देश विकास गर भनेर अभिमत दिएका छन् । तर, केही समययताका चर्चा–परिचर्चा ‘जोगी देख्दा भैंसी र भैंसी देख्दा जोगी तर्सिने’ जस्ता देखिएका छन् । जनमतमा धोका नहोस् ।
खेमराज उपाध्याय, अनलाइनबाट
आँखु खोलाको नियति
‘संचालक नै खराब’ (९–१५, पुस) रिपोर्टले नेपालमा लगानीको अवस्था देखाएको छ । खराब नियतका संचालक र नियमन अभावमा लगानीको जोखिम बढ्दो छ । आँखु खोला जलविद्युत् आयोजना यसको उदाहरण हो । उचित नियमन र लगानीको ग्यारेन्टी हुने हो भने नेपालका कुनै पनि जलविद्युत् योजना स्वदेशीकै लगानीमा बनाउन सकिन्छ । तर, हामीकहाँ सरकारी अधिकारीको नियतमै खोट देखिन्छ ।
नवराज बञ्जारा, अनलाइनबाट
‘संकटबाट सफलता’ (१६–२२, पुस) रिपोर्टले हौसला बढायो । तीनै जना डाक्टरलाई बधाई । उनीहरूलाई यहाँसम्म ल्याउने अनुराधा कोइरालासहित माइती नेपालको टीमलाई सलाम । डाक्टर प्रिया शेर्पा, सम्झ्ना पोखरेल र कृष्णप्रसाद न्यौपाने पैसाको पछि नलागी गरीब जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गरून् । जसबाट उनीहरू प्रेरणाका स्रोत बन्न सकुन् । सफलताको शुभकामना !
शंकर पौडेल, इमेलबाट